Taliye Cabdullaahi Shire Dhool: “Gurigayga ayaan joogaa Daacishna ima Afduuban” iyo ammaanka Puntland (dhegayso) – Radio Daljir
Taliye Cabdullaahi Shire Dhool: “Gurigayga ayaan joogaa Daacishna ima Afduuban” iyo ammaanka Puntland (dhegayso)
Oktoobar 12, 2018 2:10 g 2
Illaa iyo shalay waxaa baraha bulshada lagu baahiyey warar sheegaya in ay Daacish ay afduubatay Taliyihii ciidamada Booliska Puntland Cabdullaahi Shire Dool. Taliyaha ayaa beeniyay warkaas lagu qoray baraha bulshada, kana baahay warbaahinta qaar.
Taliye Dhool ayaa beeniyey warkaas asaga oo yiri, “waxaan ku sugnahay Garoowe, gurigeygaan ku sugnahay.”
Taliye Dhool oo dikreeto Madaxweyne Gaas lagu magacaabay 25kii Janaayo 2018, ahna kudhawaad sagaal bilood kahor, ayaa bulshada Puntland oo Radio Daljir xiriir la soo sameysay waxa ay u qaateen in xilka Taliyaha Booliska Puntland uu weli hayo Taliyihii hore ee xilka laga qaaday Cabdulqaadir Faarax Shire Ereg.
Dhanka warbaahinta waxaa aad u yar amaba aan jirin wax xiriir ah oo uu Taliye Dhool la laheeyey warbaahinta Puntland, marka kaliya oo uu Taliye Dhool bulshada Puntland ka soo dhex muuqdana waxa ay ahayd shalay, asaga oo beeniyey in ay “Daacish afduubatay,” kuna jawaabay, “waxaan ku sugnahay Garoowe, gurigeygaan ku sugnahay … ciidamadii booliska Puntland oo dhan baana i waardiyeynaya.”
Maamulka Radio Daljir oo xiriir la sameeyey laamaha ammaanka ee gobolada Puntland, waxna ka weydiiyey wada shaqaynta ay la leeyihiin Taliyaha Booliska Puntland, oo ka gaabsaday in magacooda la shaaciyo ayaa nooogu jawaabay “adeer ninkaas sidii loo magacaabay warkiisa ma aynaan maqal.”
Hoos ka dhegayso wareysiga Taliyaha ee mareegta Puntlandpost.com
Radio Daljir oo xiriir Facebook la sameeyey qoraaga warkaas beenabuurka ayaa noogu jawaabay, “Taliyuhu hadduu shaqo dadka iyo dowladda Puntland u hayo maxaa 9 bilood xabsi guri galiyey oo loo la’yahay? Muxuuse wax uga oran waayey amni-xumada baahday ee ka taagan Puntland?”
Qoraalka qoraa “Kaligii Duul” ayaa sida hoose u qornaa:
DEG DEG:Taliyihii ciidanka booliska Puntland Cabdullaahi Shire Dool iyo laba wiil oo goordhaweyd la afduubtay….
Posted by Kaligii Duul on Thursday, October 11, 2018
Sidii wararka Taliye Dhool u soo shaac-bexeen waxaa xiriir isdabajoog ah nala soo sameeyey qaybaha kala duwan ee bulshada Puntland, ayaga oo qaarkood nala qaybsaday cabashooyin ka dhanka ah hoggaanka Puntland, laamaha ammaanka Puntland, siiba hoggaanka ciidamada booliska.
Waxaa kamid Taliyaha Qaybta Booliska Gobolka Mudug, Gaashaanle Dhexe Axmed Cismaan Cali oo nala qaybsaday muuqaaalka hoose iyo laamihii ammaanka oo ka cabanaya hoggaan xumo iyo amni xumo, si gooni ahna u taabanaya ammaanxumida Gaalkacyo iyo dilka lagu hayo dhallinta reer Gaalkacyo.
Hoos ka daawo (Xuquuqdu waa KASMAAL MEDIA):
1 Gaari Booliis ayaa ka howl gala gobalka Mudug, sida uu yiri Taliyaha Qaybya Booliiska, Kasmaal Media.
Posted by Kasmaal Media on Thursday, October 11, 2018
Cabashooyinku kuma koobna laamaha ammaanka gobolka Mudug oo ka cabanaya hoggaanka ammaanka Puntland, ee waxaa jira cabashooyin saa’id ah oo ka dhan ah laamaha ammaanka ee gobolka Mudug, siiba kuwa Gaalkacyo.
Nindoorka Gaalkacyo ee ka cabanaya ciidanka booliska Gaalkacyo waxaa ugu horreeya Datoor Maxamed Xuseen Aadan, Agaasimaha Cisbtaalka Guud ee Gaalkacyo, oo ammaan Gaalkacyo oo ciidamada amaanku ay wax ka qabtaan haba danbeeyee ka cabanaya anshax-xumada iyo ammaandarrada ciidankii ammaanka ee Gaalkacyo uu soo siyaadshay.
Agaasimaha Isbitaalka Gaalkacyo, Maxamed Xuseen Aadan ayaa sheegay in kooxo sarkhaansan oo watay astaanta Dowlada ay soo weerareen Isbitaalka oo maamusheen Qalabka, Daawada iyo Gaadiidka.Dhacdadaan ayuu sheegay iney dhacday, habeenkii ku xigay, habeenkii la diley Eebe ha u naxariisteen Marxuum Xaami Wardheere.
Posted by Nadaara on Thursday, October 11, 2018
Jirtaayo intaas oo ammaandarro iyo cabashooyin bulsho oo isdabajoog ah, iyo waliba dilka nin-doorka iyo dhallinta oo joogto ka noqday magaalooyinka Bossaso iyo Gaalkacyo, illaa iyo hadda ma jirto masuul sare ee Puntland oo ka hadlay cabashooyinka shacabka ama xataa cabashooyinka laamaha ammaanka dhexdooda.
Waxaa ayaandarro ah in dhiigga oo daadanaya Gaalkacyo iyo Bossaso ay dooddii hoggaanka ammaanka Puntland, mid la yaqaan iyo mid aan la aqoonba, ku soo arurto “gurigeygaan ku sugnahay … ciidamadii booliska Puntland oo dhan baana i waardiyeynaya.”
Maxaad uga tagteen warkii taliyaha qaybta G/mudug uu Ku lahaa cid cabasho ama mudaharaad samaynkata majirto si wadajir aha ayaana wax uga qabanaynaa asagoon marna soo hadal qaadin marxuumkii xaqdarada lagu dilay iyo kii dilay midna
Warbixin kooban oo dhameystiran